SARM inogona kutariswa sezvakangoita nyowani nyowani mune yekuvaka nyika, asi kutaura zvazviri, ivo akave akafundwa kuti agone kushandisa mumamiriro ezvinhu senge mhasuru yekuparadza chirwere kwenguva yakati.
Vatambi vazhinji vakatora iyi ongororo ndokuishandisa kukwidziridza mashandiro kana kunatsiridza muviri wavo kuvandudza mashandiro munzvimbo inokwikwidza. SARM kuwedzera kunogona kuwana nzvimbo muchivakwa chemhasuru kana chirongwa chinopisa mafuta, uye mhedzisiro yacho inogona kutonyanya kushamisa kana ikasanganiswa nemazvo.
Zvekudzoreredza kubva kuvanabolic steroid kana prohormone Cycle, rave kufarirwa kushandisa SARM. Izvo zvinobatsira kuziva zvinoitika mumuviri wemunhu mushure mekumiswa kwesteroid kutenderera kuti unzwisise chikonzero cheizvi.
Kugumisa kutenderera kwemaSARM
kutora kutenderera kutsigira zvinowedzera, ingave steroid kana prohormones, inoderedza kugadzirwa kwemahormone emuviri. Muviri unoona kuwanda kwe androgens uye unotumira chiratidzo kune iyo hypothalamus yekudzora kuburitswa kwegonadorelin. Uku kudzikisira kunotungamira mukudzikiswa kwekugadzirwa kwemaluteinizing mahormone uye follicle-inosimudzira mahormone nepituitary gland. Uku kuderera, zvakare, kunomisa kugadzirwa kwe testosterone mumasero eLeydig muma testes; iyi inonzi yakaipa mhinduro. Icho chikonzero icho testes atrophy kana kudzikira muhukuru panguva ye SARM kutenderera.
Chinangwa chekurapa kwekurapa ndechekukurumidza kugadzirisa muviri kuita mahormone uye kuratidza muviri kuti utangezve kugadzirwa kwe testosterone.
Iwo akajairika uye anoshanda makomponi anoshandiswa pachinangwa ichi tamoxifen citrate uye clomiphene citrate.
Tamoxifen uye Clomid zvinoshandiswa nekukurumidza mushure me kutenderera kweSARMs kuunza muviri kudzoka kumazinga akajairwa ehormone nekukurumidza sezvazvinogona. Zvisinei, kunyangwe nekushandiswa kweTamoxifen uye Clomid, kuchine kunonoka kudiki mukudzoka kweakajairika mahormone mazinga. Iyo iri panguva ino iyo inonyanya kukosha kurasikirwa kwemhasuru uye simba kunoonekwa.
Kushandiswa kweOstarine mukutsiva kurapa
Ostarine kusarudza inosunga kune androgen receptors mumhasuru nemapfupa; inoenderera mberi nekuita iyo androgen receptor, nepo Tamoxifen naComomid zvakajairika kugadzirwa kwe testosterone.
Nekuda kweichi chichienderera mberi chichiitwa mumhasuru, zvinodzora kurasikirwa kwemhasuru uye simba panguva yekudzoreredza. Vazhinji vashandisi vanoto taura kuwedzera kwesimba pamusoro pemhedzisiro inowanikwa munguva yesteroid kutenderera.
Kushandiswa kwechikafu. MaCalori ndechimwe chinhu chakakosha panguva yekupora. Iyo endocrine system, mushure mekutenderera, haigone kushanda nemazvo. Muviri unovavarira homeostasis, uye mushure me kutenderera kweSARMs, inowanzo kuve mune yekuwedzera, isina kujairika pairi, huwandu hwehukuru. Koriori inodyiwa inofanira kunge yakafanana kana kunyangwe kupfuura panguva yekutenderera kuti uchengetedze huwandu (kunyanya mukushayikwa kwenzvimbo yakakwana yehormone).
Kunyangwe kuziva izvi, vamwe vashandisi vanozeza kushandisa macalorie aya pavanomisa steroid kutenderera nekuda kwenjodzi yekuwedzera mafuta emuviri.
Iyo anabolic uye metabolic mhedzisiro ye Ostarine inobvumidza mushandisi kuchengetedza macaloric kudya panguva yekuvandudza kurapwa pasina kuwedzera huwandu hwemafuta.
Zvakaoma kuchengetedza izvi nekuchengetedza huremu hunowanikwa zvizere (panogara paine kurasikirwa kwemvura uye glycogen mushure me SARM kutenderera); macalorie akawedzera achapa muviri nguva yekuwedzera kuti ujairidze newhoriyamu yemhasuru.
Simba rinochengetwa kana kutowedzerwa; ndiko kuti, hapana kurasikirwa kwemhasuru, uye kunyangwe kuwedzera kudiki mairi kunoonekwa.
Ostarine yakagadzirirwa kugadzirisa kudzikisira kwemazinga e testosterone anogadzirwa nemuviri. Naizvozvo, Tamoxifen uye Clomid zvinobatsira kuunza zvakasikwa testosterone nhanho kumashure kune zvakajairwa, uye Ostarine ichaita iyo androgen receptors.
Mashandisiro ekushandisa Ostarine yecycle rutsigiro zvinowedzera?
Iyo yakajairika dosing protocol idosi izere pakutanga kwekushandisa uyezve uchidzora kubva kune iyo dosi kune yasara yenguva yekudzoreredza. Iyo yakajairwa dosing protocol inosanganisira 25 mg kwemavhiki 4-5. Sezvo hafu-yehupenyu yeOstarine ingangoita maawa makumi maviri nemana, mushonga unofanirwa kutorwa kamwe chete pazuva.
Sezvo mhedzisiro ye Tamoxifen uye Clomid haisi kuoneka nekukasira, Ostarine ichapa hukuru hwekushandisika kweyerogengen receptors mune mhasuru nyama mukushayikwa kwemahormone endogenous. Kunyangwe paunenge uchitora Tamoxifen uye Clomid, 25 mg yeOstarine panguva yekudzoreredza inokupa iwe mabhenefiti e androgen receptor agonism, pamwe nekusaita kudzvanywa kwe testosterone. Vazhinji vashandisi vanotaura nezve mabhenefiti ekuwedzera kutora mushonga kwemasvondo mashanu kusvika masere.
Saka, kushandisa Ostarine, isina androgenic mhedzisiro, isarudzo yakanakisa yekuchengetedza uye kuwedzera mhasuru uye mashandiro mushure me SARM kutenderera.
Nei uchibatanidza maSARM?
Pane zvikonzero zvinoverengeka nei ungangoda kuisa maSARM. Kana iwe uri wekutanga, zviri nani kutanga neimwe SARM kuongorora maitiro anoita muviri wako kwariri uye kuona kuti ndezvipi zvinhu zvechigadzirwa zvaunoda (kana zvausingade).
The SARM kutenderera inzira inonzwisisika yekuvandudza kushanda kwekushanda kwako. Unogona kukohwa mabhenefiti maviri akapatsanurwa SARM. Semuenzaniso, kuratidzwa kweimwe kunogona kuve kudya kwakaringana kwekutsva kwemafuta, nepo kuratidzwa kweumwe kungave kukurumidza kupora.
Iyo stack zvakare zvinoreva kuti iwe unogona kushandisa yakaderera dosi ye kutenderera kweSARMs, kuderedza njodzi ye divi zvinokonzerwa kupfuura mwero wakakwira wekomboni imwe chete; izvi zvinonyanya kuitika kana iwe uri kushandisa chimwe chinhu chisiri chehomoni senge Cardarin kana MK-677.
Ndeipi SARM Cycle ndiyo Yakanyanya Kutora?
Ostarine (MK-2866) (yakanakisa SARM yakazara). Ostarine ine yakanyanya kutsvagurudzwa nevanhu maSARM ese. Izvo zvinoshamisa zvakasiyana-siyana kune ese mafuta kupisa uye kubhowa, uye iyo divi zvinokonzerwa dzakapfava zvakanyanya pasi kusvika pakuenzanisa madhizaini kana achishandiswa zvine hungwaru. Kana usati wamboshandisa SARM zvisati zvaitika, ichi chichava sarudzo yako yekutanga.
Andarin (S-4) (sarudzo yakanakisa yevakadzi). Andarin inyoro nyoro SARM uye ndeimwe yesarudzo dzakanakisisa dzevakadzi. Iyo inozivikanwawo seS4, inogona kubatsira kuwedzera mhasuru uye kudzoreredza kwemuviri.
Ligandrol (LGD-4033) (yakakura pakuwedzera uremu). Ligandrol inofungidzirwa kuti ine gumi neshanu yakasimba kupfuura Ostarine, Kukubatsira iwe kuti uwane mhasuru uye vhoriyamu mune pfupi pfupi nguva. Nhanho yakanaka kune avo vari kubhowekana.
Radarin (RAD-140). Radarine, kana Testolone, ndiyo imwe yeanonyanya kufarirwa maSARM. Iyo inodiwa nekuda kwayo mabhenefiti ekuita, kupora, uye mhasuru kuwana. Radarine inogona kushandiswa kumira-yega kune yako yekutanga Cycle kana kupetwa neimwe SARM.
YK-11 (yakasimba SARM). Kana wanga uchishandisa SARM kwenguva yakati uye kuyedza nesarudzo dziri pamusoro uye kurongedza, ipapo YK-11 inovhara musiyano uripo pakati SARM uye prohormones. SARM ine simba inogara ichishandisa yakazara kutenderera rutsigiro uye inochengeta iyo nguva yekushandisa ipfupi sezvinobvira.
Ibutamoren (MK-677). Ibutamoren ine simba-rekusimudzira simba uye inogona kubatsira kurara uye kupora kubva mukuwedzera kukura kwehomoni. Yakanakira stacking kuti iwedzere huremu.
Cardarin (GW501516). Cardarin inoshanda kuburikidza nePARAR nzira yekuwedzera kutsungirira, kusimudzira hutano hune hutano, uye kutsigira kurasikirwa kwemafuta.
Post post kutenderera kurapwa mushure mekutenderera kwemaSARM
Post-kutenderera kurapa mushure mekushandisa maSARM zvichasiyana zvichienderana ne SARM yakashandiswa, muyero, uye kutenderera kureba. Nekudaro, kazhinji, iwe unogona kupedzisa post-kutenderera kurapwa uchishandisa pamusoro-the-counter zvinowedzerwa nekuda kwekusarudzika kwemaSARM, zvinoreva divi zvinokonzerwa kashoma uye inogona kunge isina kunyanya kuoma kana vazoita venyama.
Iwe unofanirwa kuve uine testosterone booster ine simba paruoko kuti ubatsire muviri wako kutangisa kugadzirwa kwe testosterone isingagumi uye kudzoreredza hutano hwepanyama testosterone mazinga. Kudzvinyirira testosterone kunogona kuve nenjodzi nechero mahormone ekuwedzera, saka pasina kuongororwa kweropa kusimbisa chinzvimbo chehomoni mushure mekutenderera, chinhu chakanakisa chaungaite kutarisisa muviri wako nekuubatsira kwaunokwanisa.
Kana iwe uri kushandisa yakakwira doses kana kusimba MaSARM, iwe uchafanirwa kuve neestrogen control zvinowedzera. Izvi zvinowedzera zvinodzvinyirira iyo enomatisi yearomatase, saka testosterone haigone kuchinjirwa kune estrogen. Chiito chayo zvakare chinobatsira kudzikisa cortisol mazinga uye kuwedzera testosterone mazinga akasiyana ne testosterone booster.
Iwe ungangoda kushandisa Natural Muscle Stimulant SARM kukubatsira iwe kupinda munzvimbo yakanakisa yekuchengetedza yako kutenderera kuwana uye kuramba uchifambira mberi.